Tirakoobka Suuqgeynta 2014 ee Suuqgeynta Suuqgeynta Cloud | Martech Zone
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee soo baxaya 2014 ay tahay in shirkaduhu ay bilaabeen inay eegaan waxyaabo badan oo ku saabsan safarka macaamiisha. Sidee alaabadaada looga ogaadaa internetka? Sideed u hogaamineysaa rajada laga soo bilaabo daahfurka illaa iyo beddelaad? Iyo xitaa tan ka sii muhiimsan, maxaad sameyneysaa si aad u hubiso inaad sii wado oo aad u dhisto xiriiro qiimo badan macaamiishaada?
Suuqgeynta 'Salesforce Marketing Cloud' waxay ogaatay in 86% suuqleyda heerka sare ay isku raaceen in yeelashada safarka macaamiisha ee wadajirka ah ay muhiim tahay laakiin kaliya 29% shirkadaha shirkaduhu runti waxay isku qiimeeyaan inay yihiin kuwo wax ku ool u leh abuurista safarkaas. Taasi waa farqi weyn! Waxaanan aaminsanahay in tikniyoolajiyadda iyo kheyraadku ay daboolayaan faafitaankaas. Waxaan wali karineynaa dufcadaha iyo dadaalka suuq geynta si aan ula jaanqaadno dalabaadka kooxaha iibkeena halkii aan si xeeladeysan u adeegsan lahayn ilaha.
Kaba sii darane, waxaa jira yaraansho ah Analytics kartida warshadaha iyo la'aanta kaqeybgalka suuqgeynta dhammaan dhinacyada kale ee ururka ee taageera suuqgeynta - sida adeegga macaamiisha ama horumarinta wax soo saarka. Haddii aan maanta ahaan lahaa ganacsade da 'yar, waxaan ku qaadan lahaa waqtigayga intiisa badan gacan ka geysashada sidii aan u guuleysan lahaa dhismaha istiraatiijiyad suuqgeyn loo aaneyn karo iyo ka faa'iideysiga xalalka si sax ah looga warbixinayo xeeladahaas.
Maaddaama safarka macaamilku sii caddaanayo, in labadaba saameyn lagu yeesho safarkaas iyo in la cabbiro safarka ayaa aad uga dhib badan midka masraxa iibka ah ee fudud!
Xogtani waxay ka soo xiganeysaa waxyaabaha muhiimka ah ee kale ee ka imanaya Salesforce Marketing Cloud's cilmi baaristii 2014. Salesforce waxay daabici doontaa warbixintooda 2015 Xaaladda Suuqgeynta bisha Janaayo.
Tags: Analyticscmoqalabka iskaashiMaareynta Maareyntaqalabka crmSafarka macaamiishaAdeegga macaamiishaDataEmail Marketingsoftiweerka qorsheynta kheyraadka shirkaddaERPbarnaamijka 'ERP'isku toosinta gudahafalanqaynta suuqgeyntasuuq-geynta suuqaemaylka gacantacaqli saadaalindakhliga halkii gujidaruuraha suuqgeynta iibkaqalabka dhageysiga bulshadaqalabka bulshada lagu daabaco
Waa Kuma Garsooraha Suuqgeyntaada?
29, 2014 at 11: 22 AM
Waxaa xiiso leh in xitaa shirkadaha ugu waaweyn, kaliya 29% suuqleyda ay dareemayaan inay si wax ku ool ah u maareeyaan safarka macaamiisha. Sanqadhaha sidan oo kale waa meesha ay tahay inay shirkadaha diiradda saaraan 2015…